walter mzembi on News24
ARTICLES RELATING TO WALTER MZEMBI
Work on the multi-million-dollar home of Robert Mugabe’s daughter, Bona has stalled after her father's fall from power, and President Yoweri Museveni has signalled support for a legislation that seeks to extend his long rule.
An international carnival aimed at boosting Zimbabwe's tourism industry has ended in the economically troubled country.
Tourism Minister Walter Mzembi has reportedly called on the media to help him market the country to the international community, as Zimbabwe continues to have a tainted image due to its history of bad governance.
Zim gets Chinese buy-in for Vic Falls 'Disneyland' project: report
In a development likely to get conservationists worried, Zimbabwe has signed an agreement with Chinese investors to develop its 'Disneyland in Africa' concept near the prime resort of Victoria Falls.
Zimbabwe's tourism minister Walter Mzembi, has reportedly proposed that Queen Elizabeth II and President Robert Mugabe should sit down for tea together to help boost tourism in the southern African country.
Zimbabwean Tourism and Hospitality Minister Walter Mzembi has blasted local newspapers for only "concentrating" on political fights engulfing the country, a report says.
A Zimbabwe court has freed on bail two ex-ministers who served in former president Robert Mugabe's government and face charges of criminal abuse of office and corruption.
Zimbabwe's ex-foreign minister, Walter Mzembi, who was expelled from Zanu-PF over his alleged links to Grace Mugabe, has spoken of his future under President Emmerson Mnangagwa.
A Zimbabwean minister has reportedly claimed that his colleagues in President Robert Mugabe's cabinet have been frustrating his efforts to revive the country's tourism sector.
South African tourism to Zimbabwe has declined by about half due to the weak rand says Zimbabwe minister.
Zimbabwe has been ranked amongst the world’s top 30 countries that have made advances in reducing restrictions on free movement of tourists in the past seven years, a report says.